WAR CUSUB: Hardan adag oo kasocda Jidadka Addis Ababa & Lahaanshaheeda oo muran la galiyey. – Puntlandtimes
WAR CUSUB: Hardan adag oo kasocda Jidadka Addis Ababa & Lahaanshaheeda oo muran la galiyey.
Waxaa magaalada Addis Ababa ka soo cusboonaaday qalalaas khasaare gaystay saansaan colaadeed oo hor lehna muujinaya, waxaa maalmahan magaaladaas ka socday abaabulo iska soo hor jeeda oo ay kala wadeen koox dhalinyaro ah oo lagu kala magacaabo Qeero oo Oromo ah & Faana oo Amxaaro ah.
Kooxahan mid waliba waxay sheeganaysaa mudnaanta & lahaansha magaalaad Addis Ababa, shalay ayaa faraaha la isula tagay kadib kolkii ay kooxahan mid waliba cududeeda soo bandhigtay.
Dhawrkii maalmood ee u dambeeyay ayay kooxahan dhalinyarada ah ee iska soo horjeedaa Addis Ababa culays badan saarayeen, koox waliba calanka ay wadato ayay si wayn u muujiyeen dhalinyarada Qeero ee Oromada ka soo jeeda ayaa gidaarada magaalada calankoooda ku buufiyay waxayna is hardiyeen dhalinyarada Faana oo Amxaaro ah kuwaas oo iyaguna calamo faro badan soo bandhigay kuna goodiyay in ay dhiig daadinataan hadii aysan Qeero gidaarada ay buufinayso joojinin sidaasna iska hor imaad khasaare gaystay ayaa labada dhinac ku dhex maraya.
Si kastaba ha ahaatee xaalada Ethiopia ayaa marba marka ka dambaysa sii qasmaysa, waxaa socda isbadalo xawli ku gooshayay balse aan qorshe midaysan lagu hayagnin jahooyin kala duwana u socda wuxuuna loolan xoogan ka dhex socdaa qowmiyadaha Oromada & Amxaarada oo inay isu tanaasulaani ay adagtahay.